အခုခေတ်ကာလမှာ နည်းပညာတွေက အမြဲတန်းပြောင်းလဲနေတယ်။ အရင်တုန်းက ROR အရမ်း popular ဖြစ်ပြီး အခုနောက်ပိုင်း node.js , go စတာတွေ popular ဖြစ်လာတယ်။ ဒါ့အပြင် meteor.js လိုမျိုး real time web framework တွေလည်း များလာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက် က CodeIgniter က နာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ laravel framework ကို လူသုံးများနေကြပြီ။ တကယ်လို့သာ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ် ကျင်လည်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာတွေ ဘယ်လို ပြောင်းလဲနေတာကို မလေ့လာနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တိုးတက်အောင် ကိုယ့်အချိန်တွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ရတယ်။ အချိန်တွေ ငွေတွေ အားလုံး ကိုယ့်အတွက် ကိုယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရတယ်။ ဒါတွေရင်းနှီးမှု မရှိရင် အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောင်တချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေကို အခြားသူတွေ အခြားနိုင်ငံတွေကို လွှဲပေးလိုက်ရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ မလုပ်နိုင်ငတဲ့ အခါမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို လွှဲပေးလိုက်ရတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်မှာလဲ။ ကျောင်းကို အပြစ်တင်မှာလား ? အစိုးရကို အပြစ်တင်မှာလား ? ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရင်းနှီးပေးဆပ်မှု မရှိပဲနဲ့ လေ့လာစရာ အသစ်တွေ အသိပညာအသစ်တွေ ရလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချမှာလဲ။ လူသား တစ်ယောက်မှာ တနေ့ကို ၂၄ နာရီပဲ ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံး popular ဖြစ်တဲ့ language တွေ နည်းပညာတွေ အားလုံးဟာ အခုအချိန်မှာ twitter , hacker news , github စတဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့နိုင်တယ်။ mongodb poupular ဖြစ်လာတုန်းကလည်း နေရာတိုင်းမှာ mongodb သတင်းတွေပါပဲ။ node.js အောင်မြင်လာတဲ့ အချိန်မှာလည်း ထို့အတူပါပဲ။ ကောင်းတယ် ဘာကြောင့်ကောင်းတယ် ။ ဒါကြောင့် ဘာတွေပြောင်းလဲ သွားနိုင်ဆိုပြီး ရေးတဲ့ သူတွေ ရှိသလို ၊ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး မသုံးသင့်ဘူးဆိုပြီး ငြင်းခုန်နေကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ အဲလိုပဲ ဂရုမပြုပဲ နေလိုက်တဲ့ သူတွေ လည်း အများကြီးပါ။ အခုခေတ်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ သွားနေတဲ့ ရေစီးကြောင်းလိုပါပဲ။ အခု ပေါ်လာလိုက် ပြီးရင် နောက်တစ်ခု ပေါ်လာလိုက်နဲ့ လေ့လာလို့ကို မဆုံးနိုင်ပါဘူး။ တချိန်တစ်ခါတုန်းက backbone ကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပြန်သူတွေက အခုအချိန်မှာ ember js က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြန်ပြောနေကြတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ .NET သမားတွေဆိုလည်း MSDN magazine တွေ နောက်ပြီး microsoft ရဲ့ developer event တွေကို မသွားဖြစ်ရင်တောင် ဘာတွေ ပြောသွားလည်းဆိုတာကို သိနေဖို့လိုပါတယ်။
အသစ်တွေကို သိဖို့ လေ့လာဖို့က ဒါတွေကို အမြဲ ပြောဆိုနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ်တိုင် ရောက်အောင်သွားရမယ်။ သိပ်တော့ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ blog တွေ နောက်ပြီး news တွေကို twitter , facebook စတာတွေမှာ follow လုပ်ထားမယ်။ github ရဲ့ trend ကို နေ့စဉ်ကြည့်နေမယ်။ zite လိုမျိုး personalize magazine လိုမျိုး app တွေကို ပုံမှန် ဖတ်နေမယ်ဆိုရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခမဲ့ online ပညာရေး website တွေ ဖြစ်တဲ့ udacity , coursera , edx , Openclassroom , codecademy စတာတွေ ကနေ လေ့လာသင်ယူနိုင်တယ်။
ဒါတွေ အားလုံးဟာ အလုပ်အချိန်ပြင်ပ မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အချိန်ပေးပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့တွေပါပဲ။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်တာနဲ့ လေ့လာမှုတွေကို ရပ်တန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မသွေးဖြစ်တော့တဲ့ ဓားနဲ့ တူသွားလိမ့်မယ်။ ကြာလာရင် တုန်းသွားပြီး ဘာမှ ဖျက်လို့ ပြတ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လေ့လာသင်ယူမှု ကို ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။ လေ့လာသင်ယူမှုတွေဟာ နောင်အနာဂတ်အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပါ။